कसले तिमीलाई पछाडि रोकेको छ? | Martech Zone
सोमबार, नोभेम्बर 7, 2011 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
हामीसँग अहिले चुनावमा एक समस्या भनेको उनीहरू धेरै लामो छ। उम्मेदवारलाई एक बर्षमा यसलाई बनाउने अपेक्षा गर्न को लागी प्रयास गर्नु उसको / आफैंलाई नटकेस जस्तो नदेखी लगभग असम्भव छ। यो केवल राष्ट्रपतिको लागि गाह्रो छ ... सबैजना छनौट गर्दै छन् कि कसले यो स्थान चलाइरहेको छ किनकि उनी सँधै सडकमा छनौट गर्न कोशिस गर्दै थिए। र प्रत्येक बोलीको प्रत्येक चरणको प्रत्येक सेकेन्ड मृत्युलाइ हास्यास्पद विश्लेषण गरिएको छ जबसम्म हाम्रो मिडियाले कुनै समस्याको स्क्र्याप भेट्टाउन सक्तैन। यो घिनलाग्दो छ
म उम्मेद्वार होइन, तर आफैंलाई सोशल मिडियामा बाहिर राख्न तपाईंलाई उही छानबिनको लागि खोल्छ। जब तपाईं लेख्न, ट्वीट गर्न, अपडेट गर्न र साझेदारी गर्न जारी राख्नुहुन्छ, आफुबाट जम्मा हुने झलकहरू तपाईंको लागि १०० प्रतिशत नजिक छ। यदि तपाईंले कहिल्यै गर्नुभएन भने, तपाईं केवल यसमा आफ्नो हृदय र जोश राख्नुहुन्न। म सधैं मेरो खुट्टा मेरो मुखमा टाँसिन्छु। एक दिन म मान्छे छन् बताउन छन् त्यहाँ छन् सामाजिक मिडिया को लागी कुनै नियम छैन, तब मँ गुगल + मा सबैजना कराउँछन् तिनीहरूले प्रयोग गरिरहेको तरीकाको लागि।
धेरै मानिस (र कम्पनीहरु) यस जस्तो विरोधाभास मा पर्न को सोच मा cringe हुनेछ।
किन? म पनि एक मूर्खको जस्तो देखिन्छ को डर मेरो कुरा व्यक्त गर्न बाट रोक्न गइरहेको छैन। यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने, जस्तो क्रिस बोगनले टिप्पणी गरे... तपाईं मलाई आफ्नो सर्कलबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
मैले BlogWorld Expo मा दुई आश्चर्यजनक व्यक्तिहरूसँग भेटें र म उनीहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। एक थियो आइशा टायलर, यति धेरै प्रतिभाको साथ एक व्यक्ति (मैले देखेको द्रुत बुद्धि सहित) म उनीहरुलाई सूचीबद्ध पनि गर्न सक्दिन।
मुख्य भाषण पछि, म सँगै बस्न लाग्यो मिस लोरी, एक सेलिब्रिटी पीबीएसमा उनको कामको लागि परिचित छ र सोशल मिडिया, मिडिया र शिक्षामा उनको निरन्तर कामको लागि। हामीले घण्टा कुरा गरेर बितायौं ... र आज बिहान मिस लोरीसँग एउटा ट्याब बाँड्न पाउँदा म धन्यको छु। म शब्दमा पनि राख्न सक्दिन कि ऊ कस्तो कुरा गरीरहेकी थिईन्।
चाखलाग्दो ... दुई व्यक्ति त्यसले ममा अमिट छाप छोडिदियो, कडा, कालो, महिला र सुन्दर थियो। अब - तपाईले आफ्नो फोहोर बुढा मान्छेलाई ठट्टामा हाल्न थाल्नु अघि, म तपाईंलाई त्यहाँ काट्छु। यो मलाई प्राप्त गर्ने सौन्दर्य थिएन ... यो यी दुई महिलाहरूको विस्मय प्रेरणादायक साहस थियो। मलाई लाग्यो कि यो त बाहिर जानु नै मेरोलागि गाह्रो छ तर आयशा र मिस लोरीलाई पछाडि राख्ने ती सबै कुराको म कल्पना पनि गर्न सक्दिन। यसले उनीहरूलाई ढिला बनाएको छैन। तिनीहरू एक निशान प्रज्वलित गरिएको छ सबै ठाउँमा तिनीहरू गए र सामाजिक मिडिया उनीहरूलाई जित्नको लागि अर्को चीज हो (तिनीहरू पहिले नै राम्रो तरिकाले आफ्नो बाटोमा छन्!)।
मैले यस बारे सोच्न छोडेको छैन।
विगत केही बर्षहरूमा यस उद्योगमा मेरो विकासलाई प्रेरित गर्ने चीजहरू मध्ये एक असफलताको डरमा काम गर्ने मेरो क्षमता हो। मैले केवल व्यक्तिहरूको कुरा सुन्न छोडिदिएँ जसले मलाई भनेको थियो, म गर्दिन वा गर्नुहुन्न। मैले सहकर्मीहरू, साथीहरू र परिवारको कुरा सुन्न छाडेँ। म जे भए पनि अगाडि बढें। मान्छेहरू ... म 43! वर्षकी हुँ! त्यो कति लामो भयो मलाई जित्न र अगाडि बढ्नको लागि। आज पनि, जब कसैले भन्छ कि मान्छेहरू मेरो पछाडि पछाडि कुरा गरिरहेका छन् वा तिनीहरूले अफवाहहरू साझा गर्छन्, म पछि हट्दिन - म आक्रमण गर्छु। डरले मलाई २० बर्षदेखि पक्षाघात बनायो। यसले मेरो जीवनको कम्तिमा आधा चोरेको छ, व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवै। म डराउँदिन, तर म कहिल्यै डराउँदिनँ।
त्योले भन्यो ... म Aisha र मिस लोरीको तुलनामा कम्तिमा उदास छु। ती दुबै सोशल मीडियामा सपोर्ट ग्रुप बिना ढुकुरहरू छन् (म geeks द्वारा घेरिएको थियो)। ती दुबै परम्परागत मिडियाबाट आएका हुन् जहाँ सोशल मिडिया अझै श ske्कास्पदताका साथ हेरिएको थियो। दुबै महिलाहरु हुन्, सांस्कृतिक हिसाबले त्यहाँ महिला र टेक्नोलोजी संग एक अन्तर छ। दुबैको परम्परागत क्यारियरमा प्रभावशाली पुनः सुरु र निरन्तर बृद्धि भएको थियो। यो उद्योगले वास्तवमा विविधता चुम्बक होईन भनेर उल्लेख गर्नुपर्दैन।
तर तिनीहरूले जे भए पनि यो गरे।
किन? उनीहरूको कुरा सुन्दा, यो किनभने उनीहरूको उत्कटता र दर्शन यो उद्योगमा एक अवसर थियो उनीहरूले पाएको कुनै डर भन्दा धेरै ठूलो थियो (मलाई उनीहरूलाई डर छ कि भनेर पनि थाहा छैन!)। आयशाले यसलाई पूर्ण मुख्य विनाशमा पूर्ण रूपमा राख्यो ...f*** तिनीहरूलाई उनले भनिन्। म त्यो सुन्न पम्प गरिएको थियो किनकि यो यही हो जुन म भित्रबाट आएको भनिरहेको थिए जब कोही मेरो आउँदै गरेको विनाशको बारेमा पछाडि पछाडि कुरा गर्थे।
तपाईंले यो बुझ्नुपर्दछ कि दोस्रो तपाईंले आफूलाई बथानबाट अलग गर्नुभयो, तपाईं फरक हुनुहुन्छ। बथानले तपाईंलाई पछाडि तान्न चाहान्छ। तिनीहरू तपाईं अगाडि बढेको चाहँदैनन्। तिनीहरू तपाइँलाई पक्रन चाहन्छन्। तपाईं तिनीहरूलाई दिन सक्नुहुन्न। भाग्यशाली तपाईको लागि, तपाई जस्तो अरु मानिसहरु छन् जसले तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउछन्। मैले मेरा साथीहरूसँग समय बिताउँदा BlogWorld एक्सपो, मैले थाहा पाए कि म घरमा सफल मानिस भएका थिए। र म पनि तिनीहरू सफल भएको चाहन्छु।
कसले तिमीलाई पछाडि राखेको छ? मलाई थाहा छ तपाईं तिनीहरूलाई के भन्न सक्नुहुन्छ ... केवल आइशालाई सोध्नुहोस्।
VaultPress WordPress राख्छ
नोभेम्बर २०, २००। 7::2011 अपराह्न
डग, पहिले तपाईंको ब्लगमा कहिल्यै हुनुहुन्न, मिस लोरीले यसलाई ट्विटरमा पोस्ट गर्नुभयो त्यसैले यसलाई पढ्नुहोस्… र सम्झनुहोस् तपाईंलाई #Bwela मा हेर्दै थिए तर निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईं को हुनुहुन्छ। त्यसो भए, विन्दुमा यो अद्भुत र इमान्दार पोष्ट हो। म एक विचारयुक्त यार हुँ, तर मलाई डरले मेरो जीवनमा धेरै पनी छोडिदियो। म दुई दिन मा 35 XNUMX वर्षको हुनेछु, तर त्यस डरलाई पछाडि छोड्दै कडा परिश्रम गरिरहेको छु। म तपाईको पोष्टलाई साँच्चिकै कदर गर्दछु र अरुलाई सुन्न यो धेरै राम्रो हुन्छ किन कि उनीहरू त्यस भूलभुलैया भएर गएका छन्। धन्यवाद मानिस, एक राम्रो छ !!
धेरै धेरै म्याट धन्यवाद!